Posted by ကလိုစေးထူး at 5:26 PM
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ ရှေ့ ကအုတ်ခုံမှာလဲထိုင်အုံးမှာ
Mar 20, 2007, 2:16:00 AM
ကိုသံလွင်ကို အားကျလိုက်တာ …
ကျမကတော့ ရန်ကုန်မှာနေပြီး စတိတ်ရှိုးတွေတောင် မသွားဖြစ်တာ ကြာပေါ့။
စနေ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မှာ relaxဖြစ်တဲ့အပြင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲ ဆုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးပေါ့။
မတင့်နဲ့ တွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံရှိရင်လဲ တင်ပါအုံး နော်။
Mar 20, 2007, 2:47:00 AM
ပုံလေးတွေ သဘောကျတယ်.. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ လို အဲ့ဒီထဲက တစ်ပုံကို သိမ်းထားလိုက်မယ်.. :) တော်တော်ပျော်ခဲ့ရဲ့လား.. ဒါနဲ့ဒါလေးများ သီချင်းကို ရန်ကုန်မှာ ဘာလို့ ဆိုလို့ မရတာလား။ သိရင်ပြောပြပါဦး..
Mar 20, 2007, 8:37:00 PM
အမည်မသိသူရေ.. တချိန်ချိန်တော့ ပုဂံလမ်းကို ပြန်ဖြစ်မှာပါ။
မမေဓာဝီ.. ကျနော် မတင့်နဲ့ ဓာတ်ပုံ တွဲမရိုက်ခဲ့ဘူးဗျ။ သူ့ပုံ အနီးကပ်ရဖို့တောင် မနည်းတိုးခဲ့ရတာ။
နေနေ... စတေ့ရှိုးပွဲထက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံလို ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးများ သီချင်းကို သူ ရန်ကုန်မှာ ဆိုခွင့်မရဘူးပဲ ပြောတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတာ မပြောသွားဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြားဖူးတာကတော့ သူရယ် ခိုင်ခင်ဦးရယ် ရန်ကုန်က ရှိုးပွဲတခုမှာ သူက ဒါလေးများ၊ ခိုင်ခင်ဦးက ပလာစတာလေး သီချင်းနဲ့ ဆိုတော့ သူတို့ ၀တ်ထားတာတွေက မလုံမခြုံပုံစံ ပေါက်နေတော့ အပိတ်ခံရဖူးတာကို ကြားမိလိုက်တယ်။ ကြာတော့ ကြာပါပြီ။
Mar 22, 2007, 5:50:00 PM
Tint Tint Tun gain weight. I have not seen her picture may be5years ago.
Pagan Lan... I never been listen that sound so I donot know that means the street from Yangon Univ or not. For me...Amm I studied since 1981 (1st & 2nd year at Hlaing regional college) at Yangong Univ main campus and then work till 1994. More than 1 decade I was familiar Pagan lan so you know how much I miss that.
Feb 6, 2008, 2:13:00 PM